जडीबुटी प्रशोधनमा ध्यान देऊ – Chitwan Post
नेपालमा अर्बौं मूल्यका जडीबुटी त्यसै खेर गइरहेको छ । किसानहरुले संकलन गरेका बहुमूल्य जडीबुटी पनि झारपातको मूल्यमा अवैध ढंगले निकासी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यतिसम्म कि आफैँले बिक्री गरेका जडीबुटी प्याकिङ गरेर आफैँले कैयौँ गुणा बढीमा किन्नुपर्ने नियति छ । लाखौँ केजी जडीबुटी बिनाप्रशोधन भारत र चीनमा निकासी हुँदै आएको छ । नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा सामुदायिक वनहरुमा असंख्य परिमाणमा जडीबुटी कुहिएर नष्ट भइरहेका छन् । किसानहरुले संकलन गरेका जडीबुटी पनि कौडीको भाउमा निकासी हुँदै आएको छ । सरकारले संकलित जडीबुटीको प्रशोधन गर्न उद्योग स्थापना गर्न उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गरी आवश्यक सीप तथा प्रविधि सहयोग गर्न सके अर्बौं मूल्यका जडीबुटीको सही सदुपयोग गर्न सकिन्छ । नेपालमा जैविक विविधता र भूगोलका हिसाबले पनि असंख्य औषधीय गुण भएका र व्यावसायिक कारोबार गर्न सकिने खालका जडीबुटी पाइन्छन् । सरकारले जनतालाई आर्थिक उपार्जनसहित आत्मनिर्भर बनाउन जडीबुटी प्रशोधन गर्नेतर्फ बेलैमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक भइसकेको छ ।
नेपालमा यार्सागुम्बा, भृंगीराज, चिराइतो, जटामसी, पाँचऔँले, हर्रो, बर्रो, अमला, सेतकचिनी, पाखनवेद, काउलो, पावन काउला, रातो च्याउ, अल्लो, टिमुर, काँकडसिंगो, लोक्ता, कटुकी, सुगन्धवाल, बोझो, कुरिलो, गुच्ची च्याउ, पदमचाल, तिल्याइलो, विषजरालगायतका जडीबुटी प्रशोधनबिनै अति सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नु परिरहेको छ । नेपालमा संकलित जडीबुटी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो माग भए पनि हामीले यसको सही सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ । स्वदेशी उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन तथा सीप विकासका लागि भनेर सरकारले करोडौँ रकम खर्च गर्दै आएको छ । तर, जडीबुटीजन्य उद्योग र यससँग सम्बन्धित सीप विकासका लागि कुनै कार्यक्रम गरिएको छैन । जडीबुटी संकलनमा बझाङ अग्रणी जिल्ला मानिँदै आएको छ । यस जिल्लामा बर्सेनि एक हजार टन जडीबुटी निकासी हुने गरेको छ । यस जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा जिल्लाबाहिर निकासी भएका ५६ प्रकारका जडीबुटीबाट ५० करोड रूपैयाँ भित्रिएको खबर सार्वजनिक भएको छ । अझै कच्चा पदार्थका रुपमा निकासी भएका जडीबुटीबाट तयार गरिने उत्पादनको मूल्य अर्बौं हुनसक्ने बताइन्छ । विडम्बना ! अझैसम्म पनि सरकारले चासो नदिएका कारण जडीबुटीहरु तस्करीमार्फत नै निकासी हुने गरेको छ ।
जडीबुटी प्रशोधन गरेर अर्बौं रकम आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने वास्तविकता जानकारी हुँदाहुँदै पनि सरकारी तवरबाट नेपालमा कति प्रकारका जडीबुटी छन् ? कसरी प्रशोधन गर्न सकिन्छ ? त्यसै खेर गइरहेको जडीबुटी संकलनबाट राज्यले कस्तो आर्थिक लाभ लिन सक्छ ? भन्ने सवालमा कुनै अध्ययन हुन सकेको छैन । जडीबुटीमा चासो राख्ने व्यक्ति तथा वैद्यहरुले औषधीय गुण भएका र व्यावसायिक कारोबार गर्न सकिने खालका ७५० भन्दा बढी प्रकारका जडीबुटी नेपालमै रहेको जनाएका छन् । नेपालबाट ठूलो मात्रामा जडीबुटी निकासी हुने गरे पनि कच्चा पदार्थका रुपमा मात्र गइरहेका छन् । आर्थिक समृद्धिका लागि सम्भावना खोजी भइरहेको सन्दर्भमा हामीकहाँ भएका जडीबुटीको सामान्य प्रशोधनमात्रै हुन सक्यो भने किसानहरुले राम्रो मूल्यमा बिक्री गर्न सक्छन् । स्पष्ट सरकारी नीतिको अभावमा जडीबुटी अत्यन्त सस्तो मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यतासमेत हट्ने छ । सरकारले बहुमूल्य जडीबुटीको सम्भावना अध्ययन गरी प्रशोधन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । अहिले राज्यको समृद्धिको अभियानमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रसमेत आकर्षित भएको अवस्था छ । जडीबुटी प्रशोधन गर्न प्लान्ट स्थापना गर्न सकिने हो भने रोजगारी र आर्थिक उपार्जनका ढोकाहरु स्वतः खुल्नेछन् । सरकारले जडीबुटीको अवैध निकासी रोकेर व्यवस्थित संकलन र प्रशोधन गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु जरूरी देखिन्छ ।
पत्रकार महासंघ ३ नम्बर प्रदेशमा विष्ट र अधिकारी उम्मेद्वारी